किसोर किसोरीहरुले आफुलाई अगाडि बढाउने मन्च हो ग्लोकल टिन हिरो – विपना शर्मां - Public Suchana : Public Suchana
किसोर किसोरीहरुले आफुलाई अगाडि बढाउने मन्च हो ग्लोकल टिन हिरो – विपना शर्मां
लेखक : admin १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार १७:२९ मा प्रकाशित
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १८:२४
यसलाई साझा गर्नुहोस्:
विपना शर्मां एक साहसिक व्यक्ति हुन उनि बालबालिका क्षेत्रमा उनिहरुसग सम्बन्धित हरेक अधिकारलाई स्थापित गराउन विभिन्न सामाजिक कार्यमा सहभागि एक शशक्त नारी हुन विपना शर्मा । सानै देखि उनले देखेको समाज कुनै न कुनै कारणले विभेदपुर्ण छ र कुनै न कुनै प्रकारले अन्यायपुर्ण छ । सानो उमेरदेखि उनले आफुलाइ वालवालिकाको पक्षमा उभ्याइन उनको उभ्याइ वालवालिकाले उपभोग गर्न पर्ने न्युनतम सवै प्रकारका अधिकार संग सम्बन्धित रहेको छ ।विपना उनि समाजमा वालवालिकाका सवै अधिकारलाई उनले स्थापित गराउने अत्यन्तै महत्वपुर्ण अभियानमा छिन । उनले चालेका धेरै अभियाान नेपालि समाजका लागि कतिपय स्विकारोक्तिको विषय पनि बनिरहेको छ । उनले ११ बर्षको उमेरमा नै आफु जन्मेको स्थान नवलपरासिको सुनवल भन्ने स्थानमा नेपालको पहिलो बालमैत्रि नगरपालिकाको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएकी थिइन । उनी अहिले एक्काइस टेक्न लागेकी छिन । उनि संग पत्रकार विश्व आचार्यले गरेको अन्तार्वाताको सारसंक्षेप तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
विपना जि तपाइ समाजमा स्थापित भइरहनु भएको छ हामीले देख्दा तपाइलाई वालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक शशक्त वालअधिकारकर्मीको रुपमा दैख्छौ तर तपाइ आफैले आफैलाई कस्तो देख्नु हुन्छ ? अझै भन्नु पर्दा विपना शर्माको पहिचान के हो तपाइले आफैले आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दा कसरी आफुलाई चिनाउनु हुन्छ ?
बिपना शर्मा – म आफैलाई एक वाल अधिकारकर्मीका रुपमा लिन्छु अनि बाल अधिकारका पक्षमा वोल्ने र पुर्ण बालमैत्रि समाज निर्माणका लागि हिडिरको एक अभियन्ताकोरुपमा पाउछु । मैले ११ वर्षको उमेरमा नै वाल क्लव मार्फत काम गर्न सु्रु गरेकी थिए । वाल क्लव निर्माणको केही वर्षमा नै नेपालको पहिलो नगरपालिका जुन सुनवल नगरपालिका हो त्यसलाइ मैले पहिलो बालमैत्रि नगरपालिकाको रपमा घोषणा गराउन सफल भएको थिए र संघिय सरकार घोषणा भएपछि पनि उक्त नगरपालिका नेपालको पहिलो वालमैत्रि नगरपालिकाको रुपमा रहेको छ । अहिले म डबल स्नातक होल्डर स्टुडेन्ट हो । मैले पोलिटिकल्स साइन्स र अङग्रेजि विषय अध्ययन गरेकी छु भने चाइल्ड राइट्स एक्टिभिटिज सम्बन्धि कानुनमा ब्याचलर गरेकी छु । अर्को कुरा म वाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेर । म अहिले बालमैत्रि स्थानिय शासन राष्टीय मन्च नेपाल युवा संस्थामा बोर्ड मेम्बर रहेकी छु ।
तपाइले अहिले सम्म हासिल गर्नु भएको उपलब्धि के हो ? अहिले सम्म कस्ता कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नु भएको छ ?
विपना शर्मा – उपलब्धि केलाइ मान्नु हुन्छ कामका हिसावले सोध्नु .भएको हो भने मैले अघि पनि भने मैले वालवालिका क्षेत्रमा काम गरेकी छु । सुनवल नंगरपलिकालाइ मैले सानो उमेरमा नै वालमैत्रि नगरपालिकाको रुपमा घोषणा गराउन सफल भएकी थिए त्यसरी नै अन्य स्थानमा पनि वालमैत्रि नगरपालिका वा गाउपालिका हुनु पर्छ भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौ । अवार्ड वा कुनै सम्मानको कुरा गर्नु भएको हो भने ग्लोकल टिन अवार्ड, एसियन गल्र्स ह्युमन राइट्सि अवार्ड प्राप्त गरेकी छु साथै एसियन गल्र्स एम्बेस्डर अवार्ड २०१५ आउट स्ट्याडिङग युथ अफ नेपाल, युथ काउन्सिल डिष्टीक टयालेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेकी छु । यसले मलाइ उत्साहित त बनाएकै छ त्यो भन्दा धेरै सामाजिक दायीत्वको बोध गराएको छ । त्यही समाजको दायीत्व बोध नै मेरो सवैभन्दा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको हो भन्ने लाग्छ मलाई । अर्को कुरा चाही मैले सानै उमेरमा प्रधानमन्त्रि संग भेट्ने कोषिस गरे वालवालिकाको पक्षमा मैले आफैले कोषिस गरेर बालुवाटारमा गएर पत्र दिएकी थिए त्यो कुरा पनि मेरो जिन्दगिको लागि उपलब्धिमुलक नै हो किनकि म त्यतिबेला म करिव दस एघार वर्षको थिए त्यसैले त्यसलाई पनि मैले विर्सन नसक्ने क्षणको रुपमा लिएको छु । आज मैले गरेको वालवालिका संग सम्बिन्धित अधिकारका कुरा उठाएर जुन उपलब्धिहरु हासिल भएका छन र जुन उपलब्धिहरु भविस्यमा हासिल हुदै जाने छन त्यसले सामाजमा बालबालिकाका पक्षमा काम गर्ने महिलाकोरुपमा पहिचान भएको छ यसले मलाइ एकदमै आनन्दित तुल्याउछ । विभिन्न अवार्डहरु पाएकी छु । जसले मलाइ नेपालमा पनि अन्तराष्टियरुपमा पनि चिनाएको छ ग्लोकल टिन हिरो अवार्ड जसले मेरो लागि एउटा महत्वपुर्ण पहिचान दिएको छ । ।
पहिलो पटक ग्लोकन टिन हिरो अवार्ड जित्दा र त्यो अवार्ड लिदा कस्तो महशुष भएको थियो ?
विपना शर्मा – एकदमै त्यो क्षण मेरो जिवनको नै महत्वपुर्ण क्षण हो एउटा अवार्ड जित्नु र त्यो पाउनु जो कोही खुषि त भैहाल्छ त्यतिबेला मैले आफुले फेस गरेका चुनौतिका क्षणहरु सम्झेको थिए । त्यो जित्नको लागि गरेको मिहिनेतको उपलब्धिको रुपमा उक्त अवार्डलाइ मैले लिएकी थिए र मेरो लागि त्यो अवार्ड हरेक प्रकारले सम्झन लायक छ किनकि मैले पहिलो. पटक प्राप्त गरेको अवार्ड थियो । त्यसले मलाइ मेरो आफ्नो पहिचान दिएको थियो उक्त अवार्डले राष्टिय अन्तराष्टियरुपमा मैले आफुलाई परिचत गराउन सफल भएकी थिए । यसमा पनि यस अवार्ड किसोर किसोर किसोरीको व्यक्तित्व निर्माण उनिहरुको अन्तरनिहित क्षमता निर्माण संग सम्बन्धित थियो । अवार्ड जित्दाको क्षण त्यो मेरो लागि अविश्मरणिय छ ।
ग्लोकल टिन हिरो अवार्ड भनेको के हो ? यसले युवा पुस्तालाइ कसरी सहयोग पुर्याउछ ?
विपना शर्मा – किसोर किसोरीहरुको लागि यस प्लेटफर्मले उनिहरुलाई एक्सपोज गराउने एउटा मन्च हो ग्लोकल टिन हिरो । यसले उनिहरुलाइ अगाडि बढ्न मद्धत गर्दछ जिवनमा सफल बन्नको लागि केही गनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउछ । सकारात्मक सोच निर्माण, सहकार्य, आत्मसम्मान, क्षमता निर्माण तथा आत्मविश्वास निर्माण गर्ने प्लेटफर्म हो । आयामि व्यक्तित्व निर्माण गर्न विषय वस्तुलाइ गम्भिरतापुर्वक बुझ्नको लागि यो प्लेटफर्मले सहयोग पुर्याउछ । कतिपय अवस्थामा टिनेजर लाइफमा कतिपय कुराहरुले किसोर किसोरीलाइ आफुले भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरामा द्धिविधा उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो कुराहरुमा आफुलाइ करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्दछ । समग्रमा यसले किसोर किसोरिहरुलाइ आफुलाई एक्सपोज गराउने माद्यमकोरुपमा ग्लोकल टिन हिरो आइरहेको छ ।
वालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न कसरी प्रेरित हुनु भयो । तपाइ यो क्षेत्रमा लाग्न सुरु गर्दाको
विपना शर्मा – मैले सानै देखि अर्थात वच्चाको उमेर देखि नै वालवालिकाहरुका कतिपय अधिकारहरु हनन भएको देखेकी थिए । कतिपय बालबालिकाहरुले न्युनतम आधारभुत अधिकार बाट समेत बन्चित भएको पाएकी थिए । सानोमा हामीहरु विभिन्न होटलहरुमा नास्ताहरु खान जादा सानो बालबालिकाहरु होटलहरुमा भाडा माझेको देखेकी थिए । यसले मलाई एकदमै दुखित बनाउथ्यो । यो त वाल श्रम संग जोडियो । यस्ता बाल श्रमिकहरु देख्दा मेरो मन एकदमै दखित हुन्थ्यो । उनिहरुलाइ त्यसरी काममा लगाइनु हुन्न भन्ने मान्यता मेरो मनमा लागेको थियो । यस बारे अझै गहिरिएर बुझ्दा कतिपय वालवालिकाहरु स्कुल नैं जान पाउने रहेनछन । मेरो मनमा किन यस्तो भएको हो भन्ने भइरहेको थियो । मैले उनिहरुको अधिकारका लागि काम गर्ने सोच बनाए । यसरी नै म प्रेरित भएकी हु । जव काम गर्दै गए सवैको साथ सहयोगले अझै धेरै उत्साहित भएकी थिए । यसरी नै मेरो यो क्षेत्रमा पर्दापण भएको हो । निश्चय नै आफन्तहरुको सहयोग मेरो लागि प्रेरणाको श्रोत हो
किन किसोर किसोरीहरुले ग्लोकल टिन हिरोमा एप्लाइ गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
विपना शर्मा –यस ग्लोकल टिन हिरोमा किसोर किसोरीहरु लाग्नु पर्ने धेरै कारणहरु छन । ,उनिहरुलाई यस मार्फत अगाडि बढ्न,क्षमता निर्माण गर्न, सहकार्य गर्न, सफलताको एउटा नया मार्गचित्र निर्माण गर्न, एक अर्काको भावना बुझ्न, व्यक्तित्व निर्माण गर्न यो फोरम एकदमै राम्रो फोरम हो । कतिपय टिनएजरहरुले आफुलाई प्रुभ गर्ने अवसर पाइरहेका हुदैनन । आफ्नो क्षमता निर्माण गर्ने अवसरहरु प्राप्त गरेको हुदैनन । यो एउटा उपयुक्त पलेटफमै हो जसले जिवनमा हरेक सफलता हासिल गर्नका लागि सिकाउछ ।
तपाइ जस्तै टिनएजर साथिहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
विपना शर्मा – कतिपय टिनएजर साथिहरुमा हाफु असफल भइरहेको छु भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ । आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि दौडिदा कहिलेकाहि आफ्नो आत्मविश्वास गुमाइरहनु भएको पनि हुन सक्छ । उपयुक्त प्लेटफर्मको अभावमा आफुलाई अलमलिएको पनि हसन सक्नुहुन्छ । तपाइहरु आउनुस एउटा सकारात्मक सोचको सुरुवात गरौ । आफुलाई सक्षम क्षमता एवम पुर्ण आत्मविश्वास निर्माण गरि आजको एक्काइसौ शताब्दिको उत्कृष्ट नागरिक भएर सहकार्य गरौ काम गरौ भन्न चाहान्छु किनकि हामी समाज देश र राष्टको भव्रिश्य पनि हौ । यसकारण हामीले नेपालि समाजका विविध अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न पर्ने छ भन्न चाहान्छु साथै ग्लोकल टिन हिरोमा सहभागिताको लागि आव्हान गर्न चाहान्छु ।
ग्लोकल टिन हिरो २०२० मा किसोर किसोरीहरुले कसरी भाग लिन सक्छन ?
विपना शर्मा –यो कार्यक्रम सेप्टेम्वरमा हनु पर्ने हा तर कोभिड १९ को कारणले अहिले यो डिसेम्वरमा हुदै छ । यसमा हामीलाइwww.nepal.glocalteenhero.comलगइन गरेर त्यहा उपलव्ध फर्महरु भर्न सक्नुहुन्छ । हामीलाई समाजिक संजालमा फेसबुक मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ ।